Ny soritr'aretin'ny COVID-19 lavitra ho an'ny olona voan'ny aretina rheumatic
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny soritr'aretin'ny COVID-19 lavitra ho an'ny olona voan'ny aretina rheumatic
Ny fikarohana dia fantatra fa ny COVID lavitra dia avo indrindra ho an'ny mpifoka sigara, ny marary miaraka amin'ny aretina toy ny asthma na ny aretin'ny havokavoka, ny homamiadana, ny aretin'ny voa mitaiza, ny diabeta, ny tsy fahombiazan'ny fo congestive na ny infarction myocardial, ary ireo mandray corticosteroids.
"Ny fahafantarana ny fiantraikan'ity olana ity dia manakiana," hoy i Medha Barbhaiya, MD, MPH, rheumatologista ao amin'ny HSS izay nitarika ny fianarana. "Ho an'ny marary rheumatology, ny COVID lavitra dia mety ho sarotra indrindra satria ireo marary ireo dia efa manana olana ara-pahasalamana lehibe ary mitaky fanadihadiana bebe kokoa."
Ny Dr. Barbhaiya sy ny mpiara-miasa aminy dia nanolotra ny fandalinany, "Factors Risk for 'Long Haul' COVID-19 in Rheumatology Outpatients in New York City," tao amin'ny American College of Rheumatology (ACR) fivoriana fanao isan-taona.
Ho an'ny fanadihadiana, ny vondrona Dr. Barbhaiya dia nandefa mailaka fanadihadiana tamin'ny lehilahy sy vehivavy 7,505 18 taona no ho miakatra izay notsaboina tao amin'ny HSS noho ny fitarainana rheumatologique teo anelanelan'ny taona 2018 sy 2020. Nanontaniana ireo mpandray anjara raha nahazo fitsapana tsara ho an'ny COVID-19 izy ireo na raha Nilaza tamin'ny mpitsabo iray izy ireo fa voan'ny aretina izy ireo.
Ny mpikaroka dia namaritra ny otrikaretina COVID-19 lavitra ho an'ireo manana soritr'aretina maharitra iray volana na mihoatra, fa ny tranga misy fe-potoana voafetra kosa dia heverina fa misy soritr'aretina maharitra iray volana latsaka.
Amin'ireo olona 2,572 nahavita ny fanadihadiana, efa ho 56% amin'ireo marary izay nitatitra fa voan'ny COVID-19 no nilaza fa naharitra iray volana farafahakeliny ny soritr'izy ireo. Marary roa ihany tamin'ny fanadihadiana no voan'ny aretina fibromyalgie teo aloha - toe-javatra voamariky ny havizanana, ny fanaintainan'ny hozatra ary ny soritr'aretina hafa mifandray amin'ny COVID lavitra - izay milaza fa ny fifandonana eo amin'ireo aretina roa ireo dia kely indrindra.
"Ny fikarohanay dia tsy milaza fa ny soritr'aretin'ny fibromyalgia dia adika amin'ny fomba diso toy ny COVID amin'ny marary amin'ny aretina rheumatic, izay zavatra natsangana ho azo atao," hoy i Lisa A. Mandl, MD, MPH, rheumatologista ao amin'ny HSS ary mpanoratra ambony amin'ny fianarana vaovao.
Ny mpikaroka HSS dia mikasa ny hampiasa ny angon-drakitra ho ampahany amin'ny famakafakana lavitr'ezaka amin'ny marary rheumatology miaraka amin'ny COVID lavitra mba hamaritana raha manelingelina ny toe-pahasalamany ny soritr'aretin'ny otrikaretina. Ny fanaraha-maso mitohy amin'ireo marary ireo dia hanome fanazavana manan-danja momba ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny marary voan'ny rheumatic.